Umatilasi wasentwasahlobo ngamanani aphelele | Rayson
Ukuthembela kubuchwepheshe obuthuthukisiwe, amakhono amahle okukhiqiza, kanye nensizakalo ephelele, iRayson ihola embonini manje futhi isakaza iRayson yethu emhlabeni wonke. Ngokubambisana nemikhiqizo yethu, izinsizakalo zethu nazo zinikezwa njengezinga eliphakeme kakhulu. Umatilasi wasentwasahlobo sizokwenza konke okusemandleni ethu ukusebenzela amakhasimende kuyo yonke inqubo kusuka ku-Product Design, R & D, ukulethwa. Uyemukelwa ukuze uxhumane nathi ukuze uthole imininingwane eyengeziwe mayelana ne-Match Proct Spring Matress yethu noma inkampani yethu.Veople egqoka lo mkhiqizo inamazwana afanayo kuyo: ithambile futhi inethezekile. Hhayi ukuluma noma ubukhulu obukhulu.